Xog Culus: Akhriso Liiska Xildhibaanada u Codeyn Doona Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh | Kismaayo24 News Agency
Xog Culus: Akhriso Liiska Xildhibaanada u Codeyn Doona Musharax Madaxweyne Xasan Sheekh
Wednesday November 30, 2016 - 6:52 under Somali News by Tifaftiraha K24
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan 2016ka ayaa noqoneysa midii ugu Adkeyd ee waayadan dhacda, iyadoo guud ahaan dalka laga dareemayo dhaq-dhaqaaqyadu ay Mashurixiintu ugu jiraan in dadka ay codka ka helayaan ay ku biiriyaan barlamanka cusub ee Soomaaliya.
Gudigga Hirgalinta Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in 43 Sanator oo Aqalka sare ah iyo 178 Xidlhibaan oo aqalka hoosa ah ilaa iyo hada doorashadooda ay ka dhacday caasimadaha dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Xubnihii lagu soo doortay Magaalooyinka Cadaado iyo Jowhar ayaa intooda badan u muuqday in ay ka tirsan yihiin Ururo Dano kala duwan leh kuwaasi oo ku hardamaya hogaanka siyaasada Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in 4ta sano ee soo aadan uu dib ug u soo laabto Hogaaminta qaranka Soomaaliya, isagoo taas ka dhabeynaya waxa uu sameynayaa dadaal kasta oo uu ku heli karo Xildhibaano isaga Aaminsan oo ku soo baxa Aqalka hoose ee Barlamanka Soomaaliya oo ka kooban 275 Mudane.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku xeydaaban yihiin kooxdiisa Dam-jadiid ayaa sameynaya waxkasta oo uu saaxiibadiis uga dhigi karo Xildhibaano kamid noqda Barlamanka Federaalka Soomaaliya.
Xasan Sheekh ayaa si musuq-maasuq ah ku soo saaray tiro xildhibaano ah oo uu codkooda ku xisaabtamayo, halka kuwa kale oo uu ka baqayo in qorshihiisa ay caqabad ku noqdaan uu sahlay sidii ay ku noqon lahaayeen Xubin baarlaman.
Tusaale ahaan Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ogolaaday in Barlamanka cusub ay soo galaan xubno Aala Sheekh ah oo heshiis ay wadagaleen sida Xasan Macalin, Xaaraan Kunaax iyo Axmed Macalin Fiqi.
Sidoo kale waxa uu si ka baxsan shuruucda doorashada uu ku soo saaray Rag ay saaxiibo yihiin sida Mahad Maxamed Salaad, Wasiir Odowaa, Wasiir C/risaaq iyo kuwa kale.
Hassan Sheekh iyo Jubbaland
Sida wax u muuqdaan Xubnaha Jubbaland intooda badan waxaa yeelan doona qofkii siyaasadiisu ay qanciso Axmed Madoobe, laakiin waxaa la soo sheegayaa in ay jiraan Xubno uu Xasan Sheekh wato oo Kismaayo kasoo galay.
Liiska Xubnaha u Codeyn Doona Xasan Sheekh:
Faarax Sheekh Abdulqaadir
Abdirisaaq Cumar Maxamed
Jawaahir Axmed Cilmi
C/raxman Maxamed Odowaa
Saadaq yare –Agaasime Ku-xigeenkii Madaxtooyada Soomaaliya
Cali Balcad – Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya
Samsam Daahir – Aqalk Sare
Cabdi Axmed Dhuxuloow Dhagdheer – Aqalka sare
Muuse Suudi Yalaxoow – Aqalka Sare
Yuusuf Geele Ugaas – Aqalka sare
Abukar Ahmed Hashi – Aqalka sare
Liiska waxaa ka dhiman Dad badan waxaan Magacyadooda ku soo gudbin doonaa Qormada 2aad ee dhawaan aan daabici doono.
Isha Warka Baahin.com